इसीमाना सम्वाददाता बीरगंज १५ फाल्गुण २०७७ 316 पटक पढिएको
वरिष्ठट स्त्री रोग विषेशज्ञ डा. लक्ष्मी थापा र बरिष्ठ फिजिसियन डा. निरज सिंह सम्मानित हुनु भएको हो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा पुर्व उप–प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य’ सम्मानपत्रले उहाँहरुलाई सम्मान गर्नु भएको हो ।
स्वस्थ्य दर्पण मिडिया प्रा.लि. को ९ औ वार्षिक उत्सवको अवसरमा वहाँहरुलाई सम्मानित गरिएको हो । कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणका अध्यक्ष सन्दिप श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समपन्न भएको थियो ।
सम्मानले आफूलाई झनै उत्साहित बनाएको डा. लक्ष्मी थापाले बताउनु भयो । कोभिडकालमा नागरिकलाई पुर्याएको सेवाको पहिचान भएकोले र यसले आफूलाई झनै जिम्मेवार बनाएको भन्दै डा. थापाले नागरिकको सेवामा उत्साहपूर्वक क्रियाशिल भइरहन सम्मानले बल मिलेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै डा. सिंहले पनि सम्मानले कोभिडकालको कठिन यात्राको स्मरण गराएको बताउनु भयो । समाजले त्यतीबेलाको योगदानलाई सम्झेकोमा खुशी लागेको उहााले बताउनु भयो ।